Wacaal Daray ah: Shan kamid ah dadkii ku lug lahaa dilkii iyo kufsigii loo gaystay Caa’isha Ilyaas oo Garowe lasoo gaarsiiyay – Radio Daljir
Wacaal Daray ah: Shan kamid ah dadkii ku lug lahaa dilkii iyo kufsigii loo gaystay Caa’isha Ilyaas oo Garowe lasoo gaarsiiyay
Abriil 20, 2019 6:50 b 0
Dowladda Puntland ayaa xalay saqdii dhexe magaalada Garowe waxa ay soo gaarsiiyay shan kamid ah dadkii ku lugtaa kiiskii kufsiga iyo dilka ahaa ee loo geystay Caa’isha Ilyaas Aadan.
Sarkaal katirsan laamaha amniga ayaa Daljir u xaqiijiyay in raggaani ay ku jiraan kuwo iskudayay inay baxsadaan oo ugu dambayn lagu guulaystay in gacanta lagusoo dhigo.
Ma jirto cid hadda ka maqan gacanta dowladda oo ku lug lahayd kiiska Caa’isha, ayuu inoo sheegay sarkaalka.
Ragga hadda loo hayo kiiska Caa’isha oo dhan 7 rag ah ayaa waxay isugu jiraan kuwo kiisku ku cad yahay iyo qaar kaloo loo haysto inay ku lug leeyihiin oo uu weli baaritaan ku socdo.
Eedeysanayaasha ayaa maxkamada lasoo taagidoonaa todobaadkaan soo socdo, sida ay maxkamadu sheegtay.
Diiwaanka warkan radio Daljir Bosaaso.
Madaxda maamul goboleedyada dalka oo ku shiraya Nayroobi iyo Beesha Caalamka oo ka soo qaybgalaya